About Us - Boguan Plastic kurongedza Material Co., Ltd.
Zvokudya kavha hygienestandards ose polyethylene zvinogadzirwa
Ningbo North Lunbo Crown Plastic kavha Materials Co., Ltd. It rakaumbwa muna May, chepakutanga kuti Beilun Guanbo epurasitiki muforoma fekitari (hwakagadzwa muna June 1996) ndechokuti restructured izvozvo. Boka rangu unyanzvi kubudisa marita mashanu kunwa mvura akangwara chivharo chinwiwa chivharo, chienderane chivharo. We nechokwadi madzidziro zvose mbishi zvokudya giredhi Pe zvedu zvinhu. Jekiseni Kuumbwa michina uye zvakarurama anoumba vari sourced mudzimai guru uye nyanzvi mugadziri kuitira kuti vakawanda zvinhu hwedu zvizere kwangoitwa asiri kuonana Kugadzirwa tine zvigadzirwa nyanzvi kuti yepamusoro zvinodiwa.
Gumi nezviviri yakachena kavha chirimwa kugadzirisa mutengi kuti kudiwa kambani ine yakazara unhu kudzora vashandi vari zvokuvakisa kwacho kuzvidzora uye akapedza chigadzirwa rokuongorora, services, Indentity. Kwokururamisa uyewo matanho akadaro Links zvose vane yakaoma chaizvo zvinodiwa ISO9001. Tinotarisa kudzora kushandisa uye nzira.
zvigadzirwa vedu njodzi uye yakavimbika. Kavha kushandiswa mvura yokunwa. Kwapfuura reEuropean mureza SGS uye GB 9687-1998 "zvokudya kavha utsanana mitemo polyethylene zvigadzirwa."
Ningbo Guta North Lunbo korona Packaging Zvekushandisa Co., Ltd. ane simba hwokugadzira kirasi simba Kutarisira vashandi, mazuvaano okuwana michina uye basa zvakakwana system.Products kwenguva refu nguva Export ari vaunganidza ruzivo ndivo yakanaka shamwari kuti ruzhinji mumabhizimisi.
More kubva Portfolio Our
Bottle Cap, Non-teura 5 Gallon Bottle Cap, Silicone Bottle Cap, Recycling Bottle Caps, Non-Spill Custom Bottle Cap, Water Bottle Cap,